Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ New Zealand » 3 ikpe COVID-19 ọzọ enwetara na New Zealand
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Prime Minista Jacinda Ardern kwuru na nsonaazụ usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa gosipụtara na ọ bụ ụdị Delta jikọtara ya na usoro ikpe nke ọrịa na ntiwapụ New South Wales nke Australia.
Okwu obodo NZ nke COVID-19 ruru 10.
Ịrị elu ọnụ ọgụgụ ndị obodo mere ka mkpọchi mba nke abụọ pụta.
Otu nọọsụ Auckland gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma bụ otu n'ime ndị nwalere ihe dị mma maka COVID-19.
Onu ogugu onu ogugu coronavirus nke obodo New Zealand ruru 10 na Wednesde, ka ekwenyechara ikpe Delta atọ nke COVID-19 taa. Okwu ọhụrụ gụnyere nọọsụ nwere ọgwụ mgbochi ọrịa n'ụlọ ọgwụ Auckland.
Ejikọtara itoolu n'ime okwu ndị a na okwu obodo ndị ọzọ butere mba nke abụọ nke mba ahụ mkpọchi ọkwa dị elu malite na etiti abali Tuesday. Ejikọtala ikpe nke fọdụrụ na oke ala, ka Ministri Ahụike siri kwuo.
Okwu ikpe atọ ọhụrụ, ndị niile nọ Auckland, bụ nwoke nọ n'afọ iri abụọ na ụma ya bụ onye mmekọ nke ikpe ama ama, nwanyị nọ n'afọ iri isii na ụma nwere njikọ na ókèala, yana nwanyị nọ n'afọ iri abụọ na ụma nwere njikọ na ikpe ọzọ akọpụtara na mbụ na Wenezde.
Agbakwunyere ebe ndị ọzọ nwere mmasị ka etinyere na webụsaịtị ahụike ahụike, gụnyere cha cha, kọleji Avondale, ọtụtụ ụlọ ahịa Auckland, ụlọ mmanya na cafes, nke a ga -emelite nke nta nke nta ka amatala ebe ndị ọzọ nwere mmasị.
N'okpuru mkpọchi ọkwa Alert 4, a na -emechi azụmahịa na ụlọ akwụkwọ belụsọ maka ndị dị mkpa dị ka nnukwu ụlọ ahịa na ọdụ ọrụ.